BREAKING: Ciidammo kasoo goostay Somaliland, Yay ku biireen? – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
November 17, 2021 Xuseen 5
Wararka ka imaanaya magaalada Buuhoodle ee xarunta gobalka Cayn ayaa sheegaya inay soo gaareen ciidammo kasoo goostay maamulka Somaliland, kuwaas oo kusoo biiray jabhadda SSC.
Ciidammada oo tiro ahaan aan la ogeyn intay gaarayaan ayaa kasoo goostay Taliska Ciidanka Somaliland ee gobalka Sool, iyagoo kasoo jeeda deegaanka.
Jabhadda SSC ayaa sanado kahor looga dhawaaqay qeybo kamid ah goballada Sool iyo Cayn, iyadoo weeraaro ka dhan ah Somaliland ka fulisay deegaano ay kamid tahay magaalada Laascaanood.
Dulqaadkii waa uu naga idlaadey waxaana la gaarey waqtigaan cashar lama ilaawaan ah u dhigilaheen Daaroodka sii bakhtinayaya……….
Buhoodle waa degaan ka mid Somaliland ka sakow waa degaan Aadan Madoobe Habar Jeclo leeyihiin.. Tuulada Buhoodle maxay sheegeysaa waxaan la wareegey Laascanood….
No mercy to Daarood waxay wax ku leeyihiin karbaash bahdil iyo dhenged laga badiyo ka dib wallaahi hablahooda beey kuu keenayaa.
naagihii iidorka ee futada olyadu ka socotay say u geerasheenayeen baaba tabar u waydeene ma naago kale baa tabar u heesaan
Ma ruwaayadii sii carar soo carar ayaa wali socota.
Beentoodu maalin walaba waji kale ayay yeelanaysaa, berigii hore waxay ahayd ciidan baa goostoo Puntaland ayuu galay, hada waxay maraysaa ciidan baa goostooo SCC ayuu galay. kkkkkkkkk oo SCC waa halkee ma dhul la yidhaahddo Scc ayaa jira ?..
Daciifnamadoodu way xad dhaaftay.
SSC-da laguu sheegi waa dibjirka Buuhoodle,oo badownimo u dheertahay oo qori la goolaaftama tuulada Buuhoodle.
Xayraan kale oo gaajaysan muxuu u kordhin karaa?
Xabada kibis ah uma qaadi karo iyo haaf bariis ah wax kale daayee.
Qaranku wuu ka tashaday reer tuulo ciidan sheegan oo gunno iska qaata,dbaqan ciidanna lahayn,waxbana u anfacayn.
Tuuladaas biqbiqdeedaa badatay ee maa gacanta qaranka lasoo geliyo?
Mid waxa LA fiirinayaa weli halkay Gaadhi karaan,waxay u goyso tuuladaas aan istaraatiijiyad u lahayn Somaliland,maadaama ay tahay tuulo qaranka.Somaliland ka tirsan,Gobolka Ogdhedrna hoos timaadda,dawladda Itoobiyana Somapiland u aqoonsantahay???
Way fiicnaan layayd hadii Puntland & Daarod maliishiyo beledkooda badowda ah ee naf ka dayaya maliishiyo,shuftonimo ay maarayn lahaayeen,dhaqan celin,iyo masruufna u awoodi lahaayeen,sidanna u dhaami.lahaayeen,nasiib darrose ma awoodaan,kacaan kale o Daarood ilaa Geel-jiraha gunno uga qora canshuurta soomaaliyeedna aanu as urtoobayn maanta